वेस्ट इन्डिजका बलरको स्यालुट - खेलकुद - साप्ताहिक
वेस्ट इन्डिजका बलरको स्यालुट
क्रिकेटमा विकेट लिएपछि खुसियाली मनाउने पनि आ–आफ्नै शैली हुन्छ । यसमध्ये केही शैलीले निकै चर्चा पाउँछन् । यस्तै कारणले चर्चामा रहेका बलर हुन्— वेस्ट इन्डिजका सेल्डन कोट्रेल । उनी विकेट लिएपछि सेनाले जस्तो स्यालुट ठोकेर खुसियाली मनाउँछन् ।
त्यति बेला उनका साथी खेलाडीहरू उनको वरिपरि हुन्छन् । अहिलेको विश्वकप खेलिरहेका वेस्टइन्डिज टिममा रहेका कोट्रेल यसरी नै खुसियाली मनाएर सबैको आकर्षणमा परेका छन् । यस्तोमा सबैको चासो के पनि छ, उनी किन त्यसो गर्छन् ? खासमा कोट्रेल आफैं सेनामा कार्यरत छन् ।
अर्को शब्दमा उनी व्यवसायिक सैनिक हुन् । उनको आबद्धता जमैका डिफेन्स फोर्ससँग छ । उनले यो स्यालुटकै लागि भनेर ६ महिना अभ्यास समेत गरेका थिए । कोट्रेल भन्छन्– म एउटा सैनिक भएपछि विकेटको खुसियाली मनाउने तरिका त त्यस्तै नै हुन्छ नि ।
प्रकाशित :असार ६, २०७६
गेलको कमजोरीको मूल्य
उपाधि जोगाउन वेस्ट इन्डिज सफल भएको विश्वकप
पहिलो विश्वकपको पहिलो च्याम्पियन वेस्ट इन्डिज १९७५
गेलको ख्याल गर्ने बानी
बेस्टको यौन आशक्ति
महिला फुटबल : जिन्कको सिकार नेपाल आश्विन ३, २०७६
प्रशिक्षक नुर साहिदा आश्विन २, २०७६
हङकङमा हलेसी भलिबल कप आश्विन १, २०७६
के विराज फर्कनेछन् ? भाद्र ३१, २०७६
सकिनन् मनिताले भाद्र ३०, २०७६
थचारिएपछि सम्हालिएको भाद्र २८, २०७६
अक्सनमा खर्चिलो सियारी राइनोज भाद्र २७, २०७६
दौड्दै, नेपाल चिनाउँदै भाद्र २६, २०७६
भाग्यमानी सुजल भाद्र २५, २०७६
वसन्तको उडान भाद्र २४, २०७६